Oduu Ammee: Obbo Jawaar Mohammad fan lagannaa nyaataa guyyoota 39 booda, guyyaa 40ffaa irratti adda kutuuf murteessuun isaanii dhaga’ame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee: Obbo Jawaar Mohammad fan lagannaa nyaataa guyyoota 39 booda, guyyaa 40ffaa irratti adda kutuuf murteessuun isaanii dhaga’ame.
Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Haamzaa Booranaa, kadhaa jaarsoliin Oromoo kaleessaa hanga har’aatti Hospitaala Laandimaark deemuudhaan taasisan, dhaga’uudhaan lagannaa nyaataa guyyoota 39 booda, guyyaa 40ffaa irratti adda kutuuf murteessuun isaanii dhaga’ame.
Guyyaa kaleessaa jaarsoliin biyyaa, Oromiyaa bakkeewwan garaa garaarra gara Hospitaala Laandimaark dhaquudhaan, hidhamtootni siyaasaa kun nyaata fudhachuu akka jalqaban kadhatanis, Poolisiin ol seensisuu diduusaaf jecha jaarsoliin kunniiniifi hidhamtoonni utuu wal hin argin hafanii turan.
Guyyaa har’aa ganamarraa kaasuun bakka sanatti argamanii, dhaamsa uummata Oromoo isaan qaqqabsiisuun, hidhamtootni kun nyaata fudhachuu akka eegalaniif kadhaa guddaa kan taasisan Atileet Daraartuu Tulluu fi namoonni jaarsolii bakka bu’an kunniin, Hospitaala Laandimaarkitti hayyama ol seenuu argataniin, dhaamsafi kadhaa jaarsolii biyyaa erga qaqqabsiisanii booda, dhumarra gaaffiin isaanii milkii argachuu gurmuu Abukaattota keessaa kan bakka sana ture, Obbo Gammachuu Guutamaa OMN-tti himeera.
Hidhamtootni siyaasaa kunniinis, kabaja jaarsolii uummata Oromoo bakka bu’anii isaan quunnaman kanaaf jecha, guyyaa 39ffaa booda guyyaa 40ffaa irratti lagannaa nyaata adda kutuuf waadaa galaniiru.
Ballinasaa oduu idilee keessatti isiniif dhiheessina